Sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhaco: furayaasha ugu fiican iyo tilmaamaha | Ragga Stylish
Sida loo sameeyo qof dumar ah oo dhib badan jacayl
Weligeen ma ogaanay qof dumar ah oo aad u adag ama kalsooni darro darteed ama inay ka baqayaan inay xiriir bilaabaan. Xaqiiqdii waxaan iska dhiibnay wax ka badan hal mar markii ay timaaddo qabsashada haweeneydan. Tani waa sababta oo ah ma ogin sida loo sameeyo naag adag oo jacayl ku dhaco. Waxaa jira furayaal iyo talooyin lagu fulinayo ujeedadan.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa furayaasha barashada sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhacda.
1 Maxay haweeneyda u adagtahay?
2 Sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhaco: furayaasha
2.1 Noqo naftaada
2.2 Sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhaco: naftaada daryeesho
2.3 Daacadnimo iyo xushmad
3 Siyaabaha loo barto sida loo soo jiito haweeney adag
Maxay haweeneyda u adagtahay?
Kahor intaadan baarin mawduuca oo aadan ogaan waxyaabaha soo jiita haweenka iyo farsamooyinka kaa caawin kara inaad la xirriirto haweenka adag, waa inaad ogaataa sababta loogu tixgelinayo inay sidan oo kale yihiin. Sidaa darteed, waa inaad qiimeysaa in qofka laga hadlayo uu "u ciyaarayo" inuu wax ku murjiyo ama uusan dan kaa lahayn. Haddii xaalada labaad dhacdo, ha isku dayin inaad u dhawaato ama aad dhibto. Ma diidi karo gebi ahaanba ceeb ama sharaf dhac, laakiin waxaa fiican inaadan ku lumin tamar si aad u guuleysato ama aad dareento raaxo la'aan. Haddii aysan waligeed ka jawaabin fariimahaaga ama aysan soo celin wicitaanada, iyo haddii ay ku jawaabto si edeb leh, markaa iyadu ma ahan haweeney adag, waa naag aan macquul aheyn.
Si kastaba ha noqotee, haween badan ayaa umuuqda inaysan adiga xiiseyneynin. Waxay tan u sameeyaan sababtoo ah waxay cabbirayaan inta aad xiisaynayso iyaga, sida ay u jecel yihiin, ama awoodda aad u leedahay inaad ka guuleysato. Xaaladdan oo kale, haddii aad isku dayi karto inaad jilciso qalbigaaga si uu uga hoos baxo cagahaaga. Marka xigta, waxaan kuu sheegeynaa sida loo guuleysto haweeney adag.
Sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhaco: furayaasha
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee dumarka adag waa inay umuuqdaan inaan la geli karin, laakiin runti maahan. Qaar badan oo ka mid ahi way xishoodaan oo waxay leeyihiin amni darro weyn. Waxyaabahani waxay ka dhigayaan mawduuca barashada sida loo soo jiito haweeney adag oo aad u dhib badan. Sidaa darteed, waxaan arki doonnaa maxay yihiin furayaasha ugu muhiimsan ee laga baran karo kuwan:
Khasab kuguma aha inaad isbarbar dhigto qofna iyo wax kayar haddaad taqaanid ama taqaanno lammaanahaagii hore. Waa inaad dareentaa inaad lamid tahay iyada qofka aad tahay iyo sidaad tahay. Sidoo kale waa inaadan u maleynin inay iyada ama tii hore ay kaa sarreeyaan maxaa yeelay hal shay shaqo kuma lahan tan kale. Waxaad tahay qof gaar ah oo aad leedahay wanaaggaaga gaarka ah, soojiidashadaada iyo hub si aad jacaylkeeda ugu dhacdo. Haddii aad xoogaa xishood badan tahay, argagaxa iska daa maxaa yeelay waxba kuma lumineyso. Waqtigan xaadirka ah xitaa ma haysatid iyada iyadaana tan ugu xun ee aad heli kartaa ay tahay maya. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tan hesho, waad u oggolaan kartaa naftaada inaad horay u sii socoto oo aad eegto mid kale oo la isku celinayo.
Sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhaco: naftaada daryeesho
Waa lagama maarmaan inaad daryeesho naftaada iyo sawirkaaga. Dumarku waxay jecel yihiin ragga qurxoon ama u muuqda kuwo la soo bandhigi karo taariikh kasta. Maahan inaad xirato dharkaaga ugu fiican ama dharkaaga, laakiin waa inaad ahaato mid dabiici ah oo leh qaab kuu gaar ah.
Daacadnimo iyo xushmad
Furaha ugu muhiimsan ee jacaylka haweeneyda adagna waa daacadnimo iyo xushmad. Daacad noqoshada ayaa muhiimad weyn u leh kasbashada qofkaas kalsoonidiisa iyo qaddarintiisa. Ma jiraan wax ka xanaaq badan oo aan fiicnayn oo ka badan qof si joogto ah u been sheega ama sawir been ah ku leh dadka hortooda. Sidan oo kale, way ku adkaatay haweeney dabeecad leh inay cagahaaga ku dhacdo.
Dhanka kale waxaan leenahay xushmad. Waa mid ka mid ah aasaaska xiriir kasta iyo qodobka aasaasiga u ah gumeysi kasta, gaar ahaan haddii ay tahay haweeney adag. Ku raaxayso bogaadin xun, amaho, ama faallooyin aan habboonayn. Waa inaad ixtiraamtaa, sida aad rabto in adiga lagugu sameeyo. Maxaa intaa ka badan, meel fog haku faanin. Wax walba waa in loo sheegaa oo loo muujiyaa sida saxda ah si ay wax u siin karto waxyar oo yar.
Caadi ahaan, ma jiraan wax haweeney adag ay ka jeceshahay in qofka ka adkaadaa uusan isaguna fududayn. Sii naftaada booskaada oo yaanay u adeegsan markay rabto. Dabcan, Waa inaad siisaa feejignaanta ay mudan tahay, laakiin ha uga dhigin wax sidaa u fudud. Ciyaaraha jirrabaadda, doorarkani waxay noqon karaan kuwo xiiso leh haddii aad taqaanno sida saxda ah ee hubka loo adeegsado.
Siyaabaha loo barto sida loo soo jiito haweeney adag
Aan aragno maxay yihiin furayaasha barashada sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhacda:
Ha quusan Furaha lagu guuleysto haweeney ka dhib badan ma ahan inay u muuqato rajo xumo. Haddii ay aragto inaad aad u baahan tahay inaad hesho, way ka bixi doontaa meheraddeeda si ka dhakhso badan.
Si deggan u dhaqan Waa inaad caymiska ku ilaalisaa kalsooni markasta. Waxa ugu yar ee ay rabaan ama haweeneyda dhinacooda joogta ayaa ah caasiyiinta ku kacaysa wax kasta oo ay rabto. Haddii aad siiso awood dheeri ah waxay ka dhigeysaa mid aan la geli karin. Waa inaad kalsooni isku qabtaa oo aad kalsooni qabtaa. Wuxuu u dhaqmay si deggan oo deggan.
Ha ka jawaabin daandaansigooda: haddii ay fududahay oo aad si deg deg ah u dhiibato codsiyada iyada, ma adkaan doontid. Waxaa jira haween badan oo tijaabiya ragga kale si ay u ogaadaan sida ay ula dhaqmaan iyo inay arkaan inta dadaal ee ay uga baxsan karaan inay iyaga u qabtaan. Feejignow dheeri ah ama luuqadda jirka iyo tanaga oo isdeg Isku day inaad caddeyso marin-u-helideeda.
Wuxuu cabiraa qadarka "maya" ee aad isticmaasho: haweenku si joogto ah ayey kuu tijaabin doonaan. Haduu had iyo jeer uga jawaabo si xun ama diidmo ah, waxaa laga yaabaa inuusan rabin inuu wax ka ogaado adiga. Si kastaba ha noqotee, ha quusan waqtiga ugu horeeya. Haddii ay muujiso inay jirto ugu yaraan suurtagalnimada, isku day inaad ogaato xiriir qoto dheer oo aad raadiso xiriirka la leh. Tan waxaa loo yaqaanaa magaca gelitaanka ciyaarta sasabashada.
Haddii uu ku dhaqmayo qariib, ha xanaaqin: Waa mid ka mid ah ciyaaraha sasabashada. Waxay uga gudbi kartaa qabow iyo jacayl ilbidhiqsiyo gudahood. Tani weli waa tijaabo si ay u hubiso falcelintooda. Samee wax caadi ah waxaadna arki doontaa sida ay dib ugu soo ceshato dabiiciyannimadeedii.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo sameeyo haweeney adag oo jacayl ku dhacda iyo maxay yihiin furayaasha sidaas lagu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo sameeyo qof dumar ah oo dhib badan jacayl
Sida loo helo gadh buuxa
Muraayadaha dhakhtarku qoro ee ragga, kuwaas oo dejiya isbeddellada